Virus အမျိုးမျိုးသတ်နည်းစာအုပ် (မြန်မာ Ebook)
Posted by ကိုဆက် ကြီး on September 25, 2013
ဒီစာအုပ်လေးကိုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ချစ်ကိုကြီး ကိုအေးလွင် (ဘူးရေမျက်ရွာ) ထံမှ ပြန်လည်မျှဝေပေးတဲ့စာ အုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အတော်လေးကောင်းပြီး ကွန်ပြူတာအသုံးပြုတဲ့ User တိုင်းလေ့လာသင့်တဲ့စာ အုပ်လေးတစ်အုပ်ဖြစ်လို့တင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာတော့ အဝင်များတဲ့ နာမည်ကြီး Virus တွေအပြင် အခြားသော Virus တွေကို ဘယ်လိုသတ်ရမလည်းဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်းသေးတဲ့အတွက် အလွယ်တကူဒေါင်းယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
** Step-1.အောက်က Download Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
** Step-2. "5sec". လောက်စောင့်ပေးပါ။
** Step-3. " << SKIP AD >> ".ကိုနှိပ်ပေးပါ။
** Step-4. Download Link ကျလာပါလိမ့်မယ်။